Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Yurub Maanta Oo Isniin Ah | Laacib.net
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Ay Qoreen Wargeysyada Yurub Maanta Oo Isniin Ah
June 10, 2019 Balaleti 1
Manchester United ayaa siin doonta goolhayaha Spain David de Gea 20 milyan ginni oo kaash ah haddio 28 jirkaan uu xagaagan u wareego PSG. Sababtuna waxay tahay De Gea oo doonaya inuu sugo ilaa iyo xagaaga danbe marka qandaraaskiisa uu dhacayo si uu si bilaash ah ugu biiro PSG una qaato lacag saxiix oo qaali ah. (The Sun)
United ayaa laga soo diiday dalab 40 milyan ginni ah oo ay ka gudbisay daafaca Crystal Palace 21 jirka Aaron Wan-Bissaka. Kooxda Gorgorka ayaa duldhigtay xiddigeeda 60 milyan ginni. (Sky Sports)
Manchester City ayaa u soo bandhigtay weeraryahanka 19 jirka ah ee kooxda Benfica Joao Felix qandaraas ku kacaya 26 milyan ginni. (Record)
Tababaraha kooxda Arsenal Unai Emery ayaa wadahadal la galay daafaca midig ee PSG iyo xulka Belgium Thomas Meunier oo 27 sanno jir ah si uu xagaagan u la soo wareego. (Daily Express)
Xiddiga khadka dhexe ee Man City David Silva ayaa sannadla danbe marka uu dhaco qandaraaskiisa kooxda waxaa loo sameynayaa kulan lagu maamuusayo waayihiisa ciyaareed isagoo doonaya inuu waayihiisa ciyaareed ku soo gabagabeeyo kooxda Las Palmas ee ka dhisan deegaanka uu ka soo jeedo ee Gran Canaria. (The Sun)
Chelsea ayaa dib u soo nooleysay xiisaheeda xiddiga garabka ka ciyaara ee Bayer Leverkusen iyp Jamaica Leon Bailey oo 21 sanno jir ah laakiin waa inay sugaan ilaa waqtiga laga qaadayo xayiraada suuqa kala iibsiga. (Daily Mail)
Man United ayaa bilowday inay qoroto liiska xiddigaha u bedelaya Paul Pogba oo 26 sanno jir ah waxayna doonayaan inay ku bedelaan midkood xiddiga Tottenham Christian Eriksen ama xiddiga Monaco Youri Tielemans. (Standard)
Arsenal ayaa dooneysa inay la soo saxiixato daafaca Faransiiska ee kooxda Saint Etienne 18 jirka William Saliba laakiin kooxda horyaalka Faransiiska ka dhisan ayaa dooneysa in amaah lagu siisiiyo ilaa iyo xillo ciyaareedka danbe. (Football.London)
Stoke City ayaa dooneysa 23 milyan ginni haddii laga iibsanayo goolhayahooda Jack Butland oo 26 jirka. (The Sun)
Daafaca kooxda Ajax Matthijs de Ligt ayaa sheegay in Cristiano Ronaldo uu weydiistay inuu ku biiro Juventus xagaagab ka dib guushii ay Portugal ka gaartay Holland. (Goal.com)
Shaqaalaha kooxda Chelsea ayaa doonaya in tababaraha kooxda Derby iyo halyeeyga Blues Frank Lampard inuu bedelo tababare Sarri oo ku sii jeeda Juventus. (Daily Mirror)
Manchester United ayaa iska diiday heshiis isku bedelasho oo ay u soo bandhigtay Inter Milan taasoo aheyd in Romelu Lukaku uu u dhaqaaqo Inter halka Ivan Peresic uu u soo wareego Man United. (Daily Star)
Waa Inay Maamulka Blus Noo Tixgeliya Codsigayaga Ee Ku Aadan Tababare Dhiigiisa Laga Helo Blus Sida Halyaygi Magaca Kulahaa Ok Ok